Bruce Campbell Stars amin'ny 'Black Friday'; Horonantsary iray momba ny mpiasa ratsy rehetra - nofy ratsy - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Bruce Campbell Stars amin'ny 'Black Friday'; Horonan-tsary momba ny mpiasa ratsy rehetra
Izy io dia ny nofy ratsy rehetra ataon'ny mpiasa antsinjarany
by Trey Hilburn III Septambra 17, 2021
by Trey Hilburn III Septambra 17, 2021 11,015 hevitra
Be dia be ny fotoana amin'ny fivarotana antsinjarany. Ka, noho izany, fotoana be dia be. Nandritra io fotoana manjombona io dia nahavita niaritra ny Zoma Mainty aho tamin'ny fotoana iray na roa. Ny sasany amintsika dia afaka mifandray amin'ilay sarimihetsika premiere Fantastic Fest ho avy, Zoma Mainty. Horonantsary azo antoka fa handefa vitsivitsy amintsika ho any amin'ny mode flashback.
Ny synopsis ho an'ny Zoma Mainty mandeha toy izao:
Vondron'orinasa mpivarotra kilalao ragtag no mahazo mihoatra ny vola naloany rehefa nivadika ho masiaka mahery setra ireo mpiantsena zoma mainty.
Bruce Campbell dia mitantana mpitantana ambony antsoina hoe Jonathan. Jiro vaovao ho an'ny Ash Williams, izay tsy sahy sy be mpitia. Zoma Mainty koa dia kintana Devon Sawa ho toy ny sakaiza mandalo fisaraham-panambadiana, tsy hahita vintana ary tafahitsoka amin'ny asa fivarotana.
Zoma Mainty dia voalaza fa manana vokatra azo ampiharina betsaka avy amin'ny karazana gory.
Zoma Mainty premieres ao amin'ny Fantastic Fest amin'ity 24 septambra ity.
Faly ve ianao mahita an'i Bruce Campbell milalao mpitantana izay mety ho tianay rehetra hankahalaina? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra. Ary koa, te-hanatrika ny Fantastic Fest na ny virtoaly [email voaaro]? Jereo hoe amin'ny alàlan'ny fitsidihana an'i FantasticFest.com.